सचिव सुवेदीलाई सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार, उत्कृष्ट पुरस्कार पौडेल, कार्कीलगायतलाई
काठमाडौ । यस वर्षको ‘सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार’ सचिव शान्तराज सुवेदीलाई दिइने भएको छ । सुवेदी हाल अर्थ सचिवमा सरुवा भएका हुन् । मुख्य सचिव डा। सोमलाल सुवेदीको सयोजत्वका गठित पाँच..
काठमाडौं । इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा पोखरीमाथि निर्माण गरिएको छ कार्यकारी अधिकृतको कार्यकक्ष भवन । त्यस्तै, पूर्वपट्टि सांस्कृतिक भवन छ । तर, यी दुवै भवन अवैधानिक रहेको खुलासा भएको छ..
भुकम्प पिडितलाई थप अनुदान ‘कहाँबाट' ?
काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रमाणित लाभग्राहीलाई निजी आवास अनुदानबापतको रकममा एक लाख रुपैयाँ थप्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको घोषणामा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी अनभिज्ञ देखिएका छन् । संसदीय विकास समितिको सोमबारको..
आज बाबुको मुख हेर्ने पर्व, कुशे औँसीका साथै मोती जयन्ती मनाइदैं
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने बाबुको मुख हेर्ने पर्व आज देशभर पितालाई विशेष सम्मान गरी मनाइँदैछ । दिवङ्गत पितालाई तर्पण, सिदादान र श्राद्ध गरेर एवम् पिताप्रति..
नेपालको एउटा यस्तो ठाउँ, जहाँ महिलाले शासन चलाउँछन्
काठमाडौं । मकवानपुरमा यस्तो समुदाय छ, जहाँ महिला ‘शासन’ चलाउँछन् भने पुरुष घरायसी काममा व्यस्त बन्ने गरेका छन् । वनकरिया जातिमा पुरुषभन्दा महिला अगाडि छन् । वनकरिया समुदायका पुरुष चुलोचौका र..
राणाकालीन दरबारहरु टिकाउन मुस्किल
काठमाडौं । क्षतिग्रस्त राणाकालीन दर्जनौं दरवार पुरानै अवस्थामा ठड्याउन चुनौतिपूर्ण देखएको छ । ती दरवारहरु पुनर्निर्माणका विषयमा सहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण सचिवालय र पुरात्व विभागबीच शितयुद्ध जस्तो चलिहरेको..
​लमजुङको रिस्तीमा ८ घर बाढी पहिरोमा पुरिए
लमजुङ । लमजुङ र तनहुँ सिमानाको एक बस्ती पहिरोसँगै खोलामा आएको बाढीले पुरेको छ । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाको सिमानामा रहेको रिस्ती गाविस–८ अन्तर्गत समिफेदको बस्ती ठाँटी खोलामा आएको बाढीले पुरिएकोे..
धोनीको विज्ञापन कोहलीको हातमा, दिनको पारिश्रमिक २ करोड
एजेन्सी । एकदिवसीय र टेस्ट क्रिकेटको कप्तानी पद गुमाउन पुगेका भारतीय क्रिकेटका ‘मिस्टर कुल’ महेन्द्रसिंह धोनीले बिस्तारै विज्ञापन पनि गुमाउन थालेका छन्। उनीसँग ११ वर्ष सहयात्रा गर्ने पेप्सी अब धोनीसँग नदेखिने..
चार वर्षमा उपत्यकामै साढे २१ लाख गाडी चालक कारबाहीमा
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट मात्र चार वर्षको अवधिमा साढे २१ लाख गाडी चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६९र७० देखि आव..
पुरातत्व विभागले यस कारण लगायो रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा रोक
काठमाडौं । रानीपोखरी पुनःनिर्माणको काम मापदण्डविपरीत रहेको जनाउँदै पुरातत्व विभागले काठमाडौं महागरपालिकालाई आजदेखि काम रोक्न निर्देशन दिएको छ। हालसम्मको निर्माण कार्य मापदण्डविपरीत देखिएकाले उक्त संरचना तत्काल भत्काउन पनि निर्देशन दिइएको पुरातत्व..
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विधेयक पारित
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्ले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विधेयक, २०७३ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । विधेयक पारित गर्नुअघि वैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको..
​अर्घाखाँचीमा जीप खस्दा ९ को मृत्यु, छ जना घाइते
काठमाडौं । अर्घाखाँचीमा आइतबार दिउँसो यात्रु बोकेको जीप सडकबाट खस्दा ९ जनाको ज्यान गएको छ भने छ जना घाइते भएका छन्। अर्घाखाँचीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जिवी घिमिरेका अनुसार सन्धिखर्कबाट..
मन्त्रिपरिषद् विस्तार, १३ मन्त्रीले शपथ लिए
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी १३ मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा उनीहरूले शपथ ग्रहण गरेका हुन् । अर्जुन नरसिंह केसी सहरी विकास, प्रकाशशरण महत परराष्ट्र,..
त्रिशुलीमा बस खस्यो, उद्धार कार्य जारी, २० जनाको शव फेला - प्रहरी
काठमाडौं । गौरबाट पोखरा जाँदै गरेको एउटा यात्रुबाहक बस त्रिशूलीमा दुर्घटना हुँदा कम्तिमा २० जनाको ज्यान गएको छ। ग १ ख ३७०९ नम्बरको बस मुग्लिनको कालीखोला क्षेत्रबाट त्रिशूली नदीमा खसेको..
फास्ट ट्रयाक भारतलाई नदिन प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीको खबरदारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण नजिकिँदै गर्दा उनको पार्टी माओवादी केन्द्रले निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्रयाक, नौमुरे जलविद्युत परियोजना र पुलिस एकेडेमीमा भारतीय सहयोग नलिन निर्देशन दिएको छ । माओवादी केन्द्रभित्र..
काँग्रेसको सकस २३ दिनपछि १३ मन्त्री
काठमाडौं । सत्तासाझेदार कांग्रेसले सरकारमा पठाउने थप मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएको छ । माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन सरकार बनेको २३ दिनमा मात्र कांग्रेसले बाँकी १३ मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।..
यात्रुबाहक बस त्रिशूलीमा खस्यो, धेरै मानविय क्षतिको आशंका
काठमाडौं । रौतहटको गौरबाट पोखराका लागि छुटेको ग १ ख ३७०९ नम्बरको यात्रुबाहक बस शुक्रबार बिहान त्रिशूलीमा बसेको छ । चितवनको मुग्लिनस्थित कालिखोला नजिकै शुक्रबार बिहान त्रिशूली नदीमा बस तैरिएर रहेको..
​कोषले तीन अर्ब ८२ करोड बढी लगानी गर्दै
काठमाडौं । गरिवी निवारण कोषले चालु आवमा विभिन्न जिल्लामा रू तीन अर्ब ८२ करोड २८ लाख ६६ हजार लगानी गर्ने भएको छ । सो बजेटअन्तरगत दुई हजार ५ सय ६२ आयआर्जन,..
अभाव टार्न कार्गोबाट डलर ल्याउँदै चार बाणिज्य बैंक
काठमाडौं । बजारमा अमेरिकी डलर अभाव बढेपछि चार बाणिज्य बैंकले विदेशबाट कार्गो गरेर डलर ल्याउने गृहकार्य थालेका छन् । आफूले विदेशमा राखेको अमेरिकी डलर कार्गो गरेर नेपाल भित्राउने गृहकार्यमा ती बैंक..
नारायणकाजीको फोन आउनासाथ देउवा फरर
काठमाडौं । आइतबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मोबाइल घण्टी बज्नासाथ यसो डिस्प्लेमा हेरे र रिसिभ गरे, हेलो, को हो ? के हो रु नमस्कार ! सञ्चो बिसञ्चो, किन फोन..
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक सातामै थप ५७ हजार भूकम्पप्रभावितलाई घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण गरेको छ । यससँगै पहिलो किस्ताको अनुदान पाउनेको संख्या एक लाख..
नेविसंघ महाधिवेशनमा ४ करोड ८२ लाख खर्च
काठमाडौं । कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको ११ औँ महाधिवेशन गर्न चार करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तीन हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि १२..
अब लाइसेन्सको फारम बुझाउन रातभरि लाइन बस्न नपर्ने, थप तीन कार्यालय खुल्दै
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र थप तीनवटा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना हुने भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सोमबार थप कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि लाइसेन्सको फाराम बुझाउनसमेत रातभरि लाइन..
भारतीय प्रम मोदीसामु हुलाकी सडकदेखि अन्तरदेशीय रेलसम्मका कुरा उठाए निधिले
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेष दूतका रुपमा भारत भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान कार्यान्वयन र त्यसमा सबै जनताको चाहना समायोजन गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको..
हामीले देश बनाउन सक्छौँ - ओली
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा मुलुक भूपरिवेष्ठित मात्र नभई एक देशवेष्ठित भएकाले त्यसको विकल्प खोज्नुपरेको बताएका छन्। युथ फाउन्डेसनले सुरु गरेको ‘युथ पार्लियामेन्ट’ शीर्षक छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले..
भारत नेपालको विकास र शान्ति हेर्न चाहन्छः मुखर्जी
काठमाडौँ । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेष दूतका रूपमा भारत जानुभएका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा राष्ट्रपति..
​‘येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामी रक्षेमा चलमाचल’
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा मनाइने ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन एवम् जनै पूर्णिमा आज मनाइँदैछ । सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी जेले गर्दा अत्यन्त..
गाडीमा अनुगमन तीब्र, दर्जनौ परे कारबाहीमा
काठमाडौँ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर यात्रा गराउने दर्जनबढी सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले मङ्गलबार यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी र..
दुर्घटनामा २७ जनाको मृत्यु भएको बस चालकको लाइसेन्स नै नक्कली
काठमाडौं । सोमबार काभ्रेको बिर्ता देउरालीमा दुर्घटनाग्रस्त बसचालको सवारी अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० नक्कली भएको तथ्य खुलेको छ । भौतिक पूर्वाधार एवम् यातायात मन्त्री रमेश लेखकले पछिल्लो समय सडक दुर्घटना बढेपछि सरोकारवालासँग..
अर्थसचिवको खान्की : सुप खान पनि तारे होटलमा अर्डर
काठमाडौं । सचिवले तलब भत्तावापत राज्यकोषबाट तलबरभत्तामा बुझ्ने ५१ हजार रुपैयाँ हो । यसबाहेक इन्धनमा मासिक एक सय लिटर पेट्रोलको सुविधा हुन्छ । अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीको खान्कीमै योभन्दा बढी खर्च..
Results 1994: You are at page 44 of 67